Ampitomboy ny fahafahanao mamonjy amin'ny alàlan'ny fonosana fanamarinana mpanafatra Cloud Cloud | Martech Zone
Ampitomboy ny fahafahanao mamonjy amin'ny alàlan'ny fonosana fanamarinana ny mpandefa ny rahona Cloud
Alatsinainy Desambra 28, 2020 Talata, Desambra 29, 2020 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny orinasa mandefa mailaka dia tena manamaivana ny fahafahan'ny fitaterana hisy fiantraikany amin'ny fikambanan'izy ireo. Ny mailaka tsara sy voaorina ary mahomby be dia be dia be ao anaty tranokala famaohana olona iray izay nanao famandrihana sy maniry hiova fo amin'ny orinasanao. Toe-javatra mahatsiravina izany.
Mbola ratsy kokoa aza, mety tsy ho tsapanao akory fa alefa any amin'ny fako ny mailakao raha tsy hoe mampiasa an fitaovana fanaraha-maso inbox. Ny tolo-kevitro momba izany dia ireo mpiara-miasa aminay 250ok, izay ampiasako ihany koa hanaraha-maso ny fametrahana ny boaty. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanomezana lisitry ny voa ary avy eo manara-maso ireo boaty boaty ireo, avy eo dia mitatitra aminao raha nanao izany na tsia ny mailakao tamin'ny Mpamatsy Serivisy Internet lehibe.
Ny lazan'ilay mailakao dia mety hisy fiatraikany amin'ny olana isan-karazany, fa ny ankamaroany dia tonga amin'ny olana dimy:
Configuration - voalamina ve ny mpamatsy anao sy ny mpizara mailaka hahafahan'ny ISP manamarina fa tena avy amin'ny orinasanao ireo mailaka?
List - havaozina, manan-kery ary tafiditra ao amin'ny mailaka anao ve ireo adiresy mailakao? Raha tsy izany dia avo kokoa ny vintana hotaterina ho SPAM
laza - fantatra ve ny fandefasana IP amin'ny fandefasana SPAM amin'ny alàlan'ny tatitra momba ny fako? Efa lisitra mainty ve izy io?
Volume - mandefa mailaka be dia be ve ianao? Ny mailaka marobe dia mandefa fanaraha-maso henjana kokoa an'ireo mpandefa.
Content - manana sainam-mena miaraka amin'ny terminolojia ampiasainao amin'ny mailaka anao ve ianao? Mandefa mailaka betsaka ve ianao miaraka amin'ny URL ratsy, domes izay nasiana saina ho an'ny malware, na tsy manana rohy fisoratana anarana ao amin'ireo mailakao ianao?
Fonosan'ny fanamarinana ny mpandefa ny rahona Cloud
Raha mandefa mailaka maherin'ny 250,000 isam-bolana sy a ianao Cloud Cloud Marketingforce mpanjifa, tokony hampiasa vola amin'ny fonosana Sender Authentication anao ianao, izay fanamafisana matanjaka mba hiantohana anao hampitombo ny fahafahanao mandefa ireo hafatra ireo amin'ny boaty. The Fonosana fanamarinana ny mpandefa manolotra ireto manaraka ireto:
Domain tsy miankina - Ity vokatra ity dia ahafahanao manao configures sehatra ampiasaina handefasana mailaka. Ity sehatra ity dia miasa toy ny adiresy From ho an'ny mailaka alefanao. Salesforce Marketing Cloud dia manamarina ny alàlan'ny mailaka alefanao amin'ny alàlan'ny rafitra Sender Policy Framework (SPF), Sender ID, ary ny fanamarinana DomainKeys / DKIM.
Adiresy IP natokana - Ity vokatra ity dia manome adiresy IP tsy manam-paharoa amin'ny kaontinao ka anao manontolo ny lazanao. Ny mailaka rehetra nalefa tamin'ny kaontinao tamin'ny alàlan'ny Marketing Cloud dia mampiasa ity adiresy IP ity. Ity adiresy IP ity dia maneho ny ankamaroan'ny lazanao fandefasana.
Mamaly ny fitantanana mailaka - Ity vokatra ity dia mifehy ny valiny azonao amin'ny mpamandrika. Azonao atao ny manendry sivana ho an'ny hafatra ivelan'ny birao sy ny fangatahana famandrihana amin'ny tanana.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fonosana Famaritana kaonty, izay amaritan'ny Marketing Cloud ny kaontinao amin'ny sehatra voafantina voamarinao. Ity vokatra ity dia manova ny fonosana rohy sy sary ary manaisotra ireo fanondroana rehetra momba ny Marketing Cloud ho fankasitrahana ny fonenanao voamarina.
Lahatsary fonosana fanamarinana fandefasana mpandefa
Domain tsy miankina
Ny sehatranao manokana dia ahafahan'ny ISP manamarina ary koa mampita ny olana amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny tadivavarana. Ao anatin'ny fonosana fanamarinana ny mpampandeha dia tsy maintsy apetrakao ny DNS anao hahafahanao mampiasa subdomain vitsivitsy handefasana sy hamaly, ary koa fanalahidy fanamarinana. Miaraka amin'ny delegasiona subdomain, antsoina koa delegasiona zona, mamindra ny ampahany amin'ny fonenanao efa lasa amin'ny Marketing Cloud ianao ho ampahany amin'ny fanaingoana ny fonenanao voamarina. Marketing Cloud dia tsy mampiasa afa-tsy ilay subdomain voatondro ho an'ny hetsika sahaza.
Nahazo mari-pahaizana feno
@ sample.domain.com MX Mamela ny fandefasana mailaka amin'ny alàlan'ny mpizara Marketing Cloud
Aza kivy bounce.sample.domain.com MX Mandefa sy mipoaka ny mailaka mizotra
navalin'i reply.sample.example.com MX Mamela ny fitantanana mailaka hamaly ny sivana ary handefa valiny amin'ny adiresy manokana
miala leave.sample.domain.com MX Mamela ny mpamandrika hisoratra anarana
sary image.sample.domain.com CNAME Isa ho an'ny mpizara sary Cloud Cloud
View view.sample.domain.com CNAME Soso-kevitra amin'ny Marketing Cloud View Amin'ny maha-mpizara Internet pejy anao
Click click.sample.domain.com CNAME Soso-kevitra amin'ny URL Cloud Cloud Click raha hanara-maso ny tsindry click
pejy pages.sample.domain.com CNAME Isa ho an'ny microsite Marketing Cloud sy mpizara pejy fipetrahana.
rahona cloud.sample.domain.com CNAME Manondro ireo mpizara pejy rahona Marketing Cloud.
MTA mta.sample.domain.com A Manondro ny adiresy IP natokana ho anao
sample.domain.com TXT Manamarina ny DKIM sy DK Selector
@ sample.domain.com TXT SPF1 - Ny satan'ny SPF dia manome alalana ny mpitsangatsangana amin'ny mfrom identité
Aza kivy bounce.sample.domain.com TXT SPF1 ho an'ny mpampiantrano
navalin'i reply.sample.domain.com TXT SPF1 ho an'ny mpampiantrano valiny
Tena te hahazo mari-pankasitrahana SSL wildcard ho an'ny sehatranao ho an'ny Marketing Cloud hampiasaina koa ianao. Ny kaonty namboarina miaraka amin'ny SAP izay tsy mampiasa mari-pankasitrahana SSL dia mampiseho sehatr'asa Marketing Cloud azo antoka amin'ny fananana sary ao amin'ny Content Builder. Rehefa manampy ny sary amin'ny mailaka ianao, ny URL ao amin'ny mpamoaka lahatsoratra dia mampiseho ny fanajanao domain custom miaraka amin'ny SAP. Ny rohy kopia eo amin'ny pejin'ny fananana sary dia mandika ny sehatra manokana hampiasaina amin'ny mailaka, pejy fipetrahana ary navigateur.
Fanamafisana ny adiresy IP
Raha vantany vao voalamina tanteraka ny fonosana Fandefasana Mpandefa dia tsy maintsy misy ny adiresy IP nanafana. Fantatra amin'ny maha Fanafanana ny IP. Izany dia satria ny ISP dia tsy manana laza mifandraika amin'ny adiresy IP anao. Raha vao manomboka mandefa ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fikirakirana vaovao ianao, dia atahorana ho voasakana. Ny ankamaroan'ny fifandraisana avy amin'ny adiresy IP vaovao dia fikasana hamoaka spam tsy ampoizina na mailaka hafa tsy ilaina, ka mampiahiahy ireo ISP amin'ny adiresy IP vaovao mandefa mailaka.
Mila fanampiana? Izaho sy ireo mpiara-miasa amiko dia ao Highbridge nandefa ny sehatray manokana, Mafana ny IP, izay manadio ny angon-drakitrao, mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fandefasana anao, ary manome anao ny lisitry ny fampielezan-kevitra sy ny fandaharam-potoananao mba hampihenana ny mety ho olana amin'ny fitaterana sy hanafainganana ny lazanao.
Douglas Karr, VP an'ny Highbridge
Ny ISP lehibe indrindra sy ny mpamatsy webmail dia manoro hevitra anao hanangana laza mandefa amin'ny adiresy IP vaovao amin'ny alàlan'ny fandefasana miadana sy amin'ny fomba kely, avy eo hampitombo ny habetsaky ny mailaka irinao amin'ireo mpampiasa azy. Ity lazan'ny fandefasana ity dia antsoina hoe fiakaran'ny maripanan'ny or mirongatra ny adiresy IP anao vaovao.
Ny tanjona dia ny hananganana 30 andro eo ho eo ny tantara sy ny angon-drakitra fandefasana mba hananan'ny ISP hevitra ny mailaka avy amin'ny adiresy IP vaovao anao. Ny fe-potoana fiakarana dia mety maharitra 30 andro ho an'ny mpandefa sasany ary fotoana fohy kokoa ho an'ny hafa. Ireo singa toy ny haben'ny lisitra ankapobeny, ny kalitaon'ny lisitra ary ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa dia mety hisy fiantraikany amin'ny habetsaky ny fotoana ilana ny adiresy IP anao ho feno tanteraka.
Ny Marketing Cloud dia mamporisika anao hifantoka amin'ny fandefasana amin'ireo mpamandrika mavitrika indrindra sy miasa mandritra ity vanim-potoana sarotra ity satria io no mety ho fototra voalohany hamaritan'ny ISP ireo adiresy IP mpandefa anao mandefa laza. Tafiditra ao anaty ramp ny fandefasana hafatra maromaro voafetra isaky ny IP isan'andro, noho izany dia mety ilaina ny manitsy bebe kokoa ireo fomba fanao fandefasana ankehitriny ao anatin'ny fizotrany.
Raha manana fanontaniana ianao na mila fanampiana amin'ny fampiharana fanaraha-maso boaty na mila fanampiana amin'ny fikirakirana ny Fonosana fanamarinana ny mpandefa, azonao atao ny mangataka fanampiana amin'ny orinasako vaovao, Highbridge. Mpiara-miasa Salesforce vaovao izahay ary nahavita an'io asa io tamin'ny fikambanana an-jatony. Afaka miara-miasa amin'ny solontenan'ny Salesforce izahay ary hampiorina anao, hampafana sy handefa mailaka!
Tags: 250okmari-pamantarana kaontysehatra manokananatokana ipfanateranadns fanamboaranamarika amin'ny mailakaESPhighbridgeip lazaip mafanamanafana iprahona marketingsehatra tsy miankinavaliny fitantanana mailakasalesforceSapfonosana fanamarinana ny mpandefamailaka sslwildcard ssldelegasiona zona